Ugu yaraan 45 qof oo Cudurka Daacuun Calooluhu uu haleelay saacadihii ugu dambeeyay ayaa la dhigay Isbitalka Banaadir
Isbitaalka S.O.S, Muqdisho ayaa Maalintii Lixaad u xiran Muran ka dhashay Haweeneey Ilma Galeenka looga saaray Isbitalkaasi
Cabsi wayn ayaa soo wajahday dadka ku nool Deegaanadda uu maro Wabiga Shabeele, kadib markii ay soo kordheen Biyaha Wabiga
Dadka soo barakacay ee ku nool Xeryaha Qaxootiga Magaalada Muqdisho ayaa laga dayrinayaa Xaaladooda
Dad hor leh oo uu soo ritay Cudurka Daacuun Caloolaha ayaa la soo dhigay 24 saac ee ugu dambeeyay Isbitaaladda Magaaladda Muqdisho,
Hay’adda Al-Manhal oo ka mid ah hay’adaha samafal ee ka jira Magaalada Muqdisho ayaa... Guji
Ugu yaraan 45 qof oo Cudurka Daacuun Calooluhu uu haleelay saacadihii ugu dambeeyay ayaa la dhigay Isbitalka Banaadir ee Magaaladda Muqdisho, Waxaana dadkan ay u badan yihiin Caruur da'doodu aad u yar yar tahay, sida laga soo xigtay Hawl Wadeen ka tirsan Isbitalkaasi,
Isbitaalka Xabeeb oo isna ku yaala Duleedka Muqdisho ayaa waxaa la soo dhigay Tiro dad ah oo uu Cudurka Daacuunka ku dhacay, Waxaana horay u jiifay Isbitaalkaasi in ka badan 50 qof oo laga dawaynayay Daacuun Caloole, sida uu Shabakaddan u xaqiijiyay Kalkaaliye sare, C/raxmaan Cali Cawaale "Xabeeb"
Cudurka Daacuunka oo Billawgii Toddobaadkan ay dhaqaatiirta Muqdisho ku dhawaaqeen inuu hoos u dhac ku yimid xawligii uu cudurkaasi ku socday ayaa imminka waxaa soo muuqanaysa inuu kor u sii kacayo, Laakiin ma muuqdaan illaa iyo hadda Gurmad Caalamiya oo astaan u noqon kara Hakinta Cudurkan Safmareenka ah ee Muqdisho iyo Deegaanadda u dhaw sida Xawliga leh ugu sii faafaya,
Dadka soo barakacay ee ku nool Xeryaha Qaxootiga Magaalada Muqdisho ayaa laga dayrinayaa Xaaladooda Nololeed tan iyo markii ay billawdeen Roobabkii gu'ga.
Dadkan oo awalba ku noolaa Guryo ka samaysan Jawaano iyo Baakado ayaa Roobabkii ka da'ay Muqdisho labadii Maalmood ee la soo dhaafay waxay sababeen in Buushashkii ay daganaayeen uu qaado Roobku, Waxaana qaarkood ay imminka Baylah u yihiin Qabowga daran ee dhacaya, iyo Roobka Cirka ka soo hooraya.
Haween iyo caruur fara badan ayaa ku dac daraysan Xeryo Qaxootiga, Waxaana la arkayay Qoysan ku hoy beelay Roobka Guga, iyadoo aysan jirin Cid illaa iyo hadda ka damqatay Dhibaatadaasi, isla markaana u istaagtay inay gacan siiso dadkan Soomaaliyeed ee intooda badan ka soo barakacay Gobaladda Koonfureed ee Somalia.
Xeryaha Qaxootiga ee Booli Tikniko, Tarabuunka, Stadium Muqdisho iyo kuwo kale ayaa ah meelaha ay sida wayn dadka ugu dac daraysan yihiin, Waxaana ay dadkan qarka u saaran yihiin inay u laadaan Qabowga iyo Roobabka is wata ee ka billawday Muqdisho.
Malaaqo Cabdow Saalim oo ah Haweeneey 80 Jir ah isla markaana Xalay ku hoyatay 2 Mitir oo horay Buush uga dhisnaa laakiin Roobabku ka bur buriyeen ayaa u sheegtay Shabakaddan in dhibaataddii Dhaqaalo xumo ee haysatay ay u raacday Hoy La'aan, Waxayna sheegtay inay xalay Hoyatay dhaxan, Shalayna ay Qoraxda korkeeda ku dhacday, sidaas darteed waxay haweenaydan oo ay diif daran ka muuqatay ku calaacashay inay ka waysay Walaalaheeda Soomaaliyeed wax gurmad Biniaadanimo ah.
Isbitaalka S.O.S oo ah kan ugu wayn ee dhalaanka iyo Hooyadda Magaaladda Muqdisho ayaa Maalintii Lixaad u xiran Muran ka dhashay Haweeneey Ilma Galeenka looga saaray Isbitalkaasi.
Maamulayaasha Isbitaalkaasi ayaa markii ugu horaysay sheegay inay suuragal tahay in Isbitalkaasi uu dib u hawl gallo, Waxayna sheegeen in Isbitaalka uu u xiran yahay Samafal ay u sameeyeen Haweeneey Soomaaliyeed, Kadib markii qaliin deg deg ah lagu sameeyay Haweenaydaas oo Minku Qarxay, taasoo Keentay in Dhaqtarku uu qaato go'aan uu Haweenaydaasi gabi ahaanba uga saarayo Minka.
Dr Bashiir oo ah dhaqtarkii fuliyay Hawshaasi Qaliinka ah ayaa sheegay in Haweenaydaasi la keenay Isbitaalka xilli ay ku jirtay Xaalad Halis ah oo u baahnayd in gurmad bini'aadanimo loo fidayo, Wuxuuna sheegay inuu ku sameeyay Qaliin kadib markii ay Ehaladeedu saxiixeen in lagu fulin Karo Qalliin.
Dr Bashiir waxa uu meesha ka saaray in Hawsha uu qabtay ay tahay mid qaldan, wuxuuna hoosta ka xariiqay in dhaqtarku uu xaq u leeyahay go'aan qaadashadda lagu bad baadinayo Bukaanka marka uu guda galo Hawsha Qaliinka.
Nin ay ehello yihiin Haweenaydaasi la qalay ayaa isna dafiray inay saxiixeen in gabadhooda laga saaro Minka, Wuxuuna sheegay inaysan aqbali Karin in la ciribtiro Tarankii gabadhaasi.
Ninkan waxa uu sheegay inay xaq u leeyihiin in gabadhooda laga siiyo Diyo 50 Halaad ah sida uu dhigay Sharciga Islaamku, Wuxuuna sheegay in haddii aysan taasi dhicin ay imaan karto dhibaato ka wayn midda hadda taagan, isagoo sheegay inaysan wax naxariis ah ka muujin doonin Boqolaalka qof ee Isbitaalkaasi lagu dawayn jiray Maalin kasta, mar haddiiba sida uu sheegay gabadhoodii lagula kacay fal ka baxsan Bin'aadanimadda, waa sida uu hadalka u dhigay ninkaasi.
Ururka Dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa iyaguna ku hanjabay inay samayn doonaan shaqo joojin hadii aysan Shacabka si cad uga hor imaan Awooda loo adeegsanayo Isbitalka S.O.S, Waxayna sheegeen in sidoo kale ay imaan doonto inaysan Dhaqaatiirtu bad baadin Bukaanadda u baahan Qaliinka deg dega ah.
Shiiq Maxamuud Aw Cabdulle Cariif oo isna u hadlay Culumaa'udiinka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhaqtarkii gabadhaasi qaliinka ku sameeeyay aan wax diyo ah lagu yeelan Karin maadaama uu hawl samafal ah sameeyay, Wuxuuna ugu nasteexeeyay dadka is hortaagay Hawsha Isbitalka S.O.S uu u hayay Shacabka inay u naxariistaan Boqolaalka qof ee Isbitalkaasi lagu dawayn jiray Maalin kasta.
Isbitalka S.O.S oo ah adeeg Caafimaad oo lacag la'aan ah Maalin kasta u samayn jiray Dumar iyo Caruur ayaa Toddobaadkan xirnaa kadib markii haweeneey qaliin looga saaray Minka ehaladoodu ay sheegeen inay ka doonayaan Isbitalka Diyo, Waxayna ku hanjabeen waliba inay dili doonaan Dhaqtarkii hawshaasi fuliyay haddii aan si deg deg ah Diyo Loo Siin, taasoo keentay in Isbitalka uu gabi ahaanba hawshiisii caadiga ahayd joojiyo,.
Cabsi wayn ayaa soo wajahday dadka ku nool Deegaanadda uu maro Wabiga Shabeele, kadib markii ay soo kordheen Biyaha Wabiga taasina ay sii kordhisay wal walkii laga qabay inuu Fataho Wabiga Shabeele.
Gobalka Hiiraan oo ka mida Deegaanadda uu maro Wabiga Shabeele ayaa walaac ka muujiyay korarka ku yimid Biyaha Wabiga Shabeele oo kor u dhaafay Xadigii ay ku yaqaaneen, Waxayna sheegeen inay Biyahu ay imminka sabaynayaan Qararka Wabiga Shabeele, isla markaana uu Wabiga qarka u saaran yahay inuu ku soo fataho Gobalka Hiiraan.
Magaaladda Baladwayne oo ay ka jirto Cabsidda ugu wayn ayaa la sheegay inay dadka degan Xaafadaha u dhaw Wabiga ay billaabeen inay ka hayaamaan Guryahooda, iyagoo cabsi wayn ka muujinaya inuu Wabiga ku soo fataho xilli aysan diyaar garoobin, Waxaana socda dadaalo lagu doonaya in looga hortaggo Masiibo ka dhalata Fatahaaad uu sameeyo Wabiga, Dadwaynaha ayaa billaabay inay Biyo xir ku sameeyaan Wabiga, inkastoo ay yartahay waxa ay ka qaban karaan Fatahaada Wabiga haddii aysan helin Gurmad Caalamiya.
Gobalka Shabeladda Hoose deegaano ka mida ayaa iyana la xaqiijiyay in Wabigii uu xilliganba ku soo fatahay, Beesha Janaale oo ka tirsan Gobalkaasi ayaa la xaqiijiyay in dhul beereen iyo deegaana ku yaalay uu Wabiga ku soo fatahay dabeetana uu qaaday, Laakiin lama ogga illaa iyo hadda Khasaaraha ka dhashay Fatahaada Wabi Shabeele.
Wabiga Shabeele oo 7 Sanno ka hor Fatahaadii ugu waynayd sameeyay ayaa imminka waxaa cabsidda ugu wayn ay timid kadib markii la arkay Wabigii uu sii buux dhaafaya taasoo loo aanaynayo Roobab ka da'ay Ethiopia oo uu Wabiga ka soo Billawdo.
Faafin: SomaliTalk.com | April 30, 2004
Wasiirka Arimahah Dibada DKMG oo eedeeyey Carabta
iyo wasiir ku xigeenkii wasaarada Dawladaha Hoose iyo Horumarinta reer Miyiga Puntland oo xaaskiisii toogatey Guji